Niavaka loatra ny fetin’ny Pentekoty tamin’ity taona ity. Ny alahady, vitsy ny mpiangona ary voafetra ihany ny isa noraisina tao am-piangonana na dia nisy maromaro aza ny fidirana.
Nahatsapa na ny raiamandreny mpitandrina aza fa mangatsiatsiaka ny fotoam-bavaka na teo aza ny ezaka fanentanana rehetra natao.
Ny alatsinainy, nangina tanteraka. Nanaja ny fihibohana ny mponina. Hentitra rahateo ireo mpitandro filaminana tamin’ny fanaraha-maso natao tamin’ireo lalana mivoaka an’Antananarivo.
Misy fangatahana fiaraha-miasa nataon’ny ATT tamin’ny mpitatitra ahafahana indray mizara « gel » ho azy ireo mandritra ny ora fiasany. Mitaky fandraisana anjara 400 Ar isaky ny fiara isan’andro avy amin’ny mpitatitra ny tompon’andraikitra ka sady hahazo « gel » no hisitraka fandrarahana fanafody ny fiara miasa. Hatramin’izao, tsy mety mandoa ilay 400 Ar ny tompon’ny fiara noho ny ambarany fa fatiantoka efa mihatra amin’izy ireo ao anatin’izao fihibohana izao, hoy ny tale jeneralin’ny ATT, Reribake Jeannot.
Nandritra ny volana mey lasa teo, distrika sivy anisan’ny tena be tazomoka no nanaovana ezaka nizarana ny pilina SP. Anisan’izany ny distrikan’Iakora, Ivohibe, Ikalamavony, Manja, Betroka, Bekily, Vondrozo, Befotaka, Marolambo.
Natao hampidinana ny tahan’ny parazita ao amin’ny vatan’ny olona ny fihinanana ny pilina SP. Zaza enim-bolana mihoatra no nomena izany. Tsapa nandritra ny fidinana ifotony fa betsaka ireo manavy, mafana hoditra.
Tatiana A sy Vonjy A.